Agromart | Agricultural Marketplace Nepal स्ट्रबेरी / भूईंकाफल खेति गर्ने तरिका – Agromart
स्ट्रबेरी / भूईंकाफल खेति गर्ने तरिका
स्ट्रबेरी / भूईंकाफल ( Strawberry) फ्रागार्या प्रजातिको विरूवा हो । यो फल विश्वव्याी खेती गर्ने गरिन्छ भने यस फलको विशेष गन्ध यसको पहिचान बनेको छ । यो फल रातो रङ्गको हुने गर्दछ । यस फललाई ताजा फलको रूपमा साथै प्रशोधन गरि जाम, रस, आइसक्रिम, मिल्क शेकको रूपमा समेत खाने गरिन्छ ।
Q 1. भूईंकाफल ( Strawberry)कस्तो हावापानीमा हुने बाली हो?
Q 2. यसको खेती धरातलिय हिसाबले कति उचाई सम्म हुन्छ ?
Q 3. यसको गुणस्तरीय फल उत्पादन गर्न तापक्रमको कस्तो अवस्था रहनु पर्दछ?
Q 4. यसको सफल खेतीको लागि कस्तो प्रकारको माटो बढी उपयुक्त मानिन्छ ?
Q 5. माटोको अम्लियपना र अन्य तत्वको कमीले बिरुवामा कस्तो असर पार्दछ?
Q 6. भूईंकाफलका जातहरु कति छन् होला ?
Q 7. यसका बिरुवा कसरी उत्पादन गरिन्छ ?
Q 8. यसका बिरुवाहरु तयार हुन कति अवधि पर्खनु पर्दछ ?
Q 9. भूईंकाफलको बिरुवा रोप्नु अगाडी जग्गाको तयारी कस्तो हुनु पर्दछ ?
Q 10. प्रति रोपनीमा लगाउने बिरुवाको लागि कति परिमाणमा मलखादको प्रयोग गर्नु पर्ला ?
यसको लागि माटो निकै मलिलो चाहिने हुँदा प्रति रोपनी २.५ मे.टन गोबर वा कम्पोष्ट मल, ६-८ के.जी. यूरिया, ५-६ के.जी. डि.ए.पि. र ५-७ के.जी. म्यूरेट अफ पोटास आवश्यक पर्दछ। यसको अलावा जिंक सल्फेट ०.५%, क्याल्सियम सल्फेट ०.५%, र बोरिक एसिड ०.२% फोलिएर स्प्रे गर्दा उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ।
Q 11. यसका बिरुवाहरुकुन समय र कति दूरिमा लगाउन उचित हुन्छ ?
Q 12. यसलाई अन्य बाली भन्दा केही विशेष हेरचाह गर्नु पर्दछ ?
Q 13. यसलाई सिंचाईको कति आवश्यकता पर्दछ ?
Q 14. भूईंकाफलका बिरुवालाई काटछाँट र तालिमको जरुरी हुन्छ ?
Q 15. यसको फल तयार हुन कति अवधि लाग्दछ?
Q 16. भूईंकाफलको फल पाकेको कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ ?
Q 17. यसको फल कसरी टिप्नु पर्दछ ? के सबै फल एकै पटक टिप्न सकिन्छ ?
Q 18. यसको उत्पादन प्रति रोपनी कतिसम्म लिन सकिन्छ?
Q 19. यसबालीलाई कीराहरुले कतिको सताउँदछन् ?
Q 20. यसमा लाग्ने रातो माकुरे कीरा कस्तो खालको कीरा हो र यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न गरिन्छ?
Q 21. यसलाई नोक्सानी गर्ने कीरा जापनिज खपटेको बारेमा पनि केही बताई दिनु हुन्थ्यो कि?
Q 22. यस बालीमा रोगको प्रकोप कस्तो छ ?
Q 23. यस बालीमा खैरो ढुसी रोगले कसरी क्षति गर्छ र यसबाट बच्न के उपाय गर्नु पर्ला ?
Q 24. यस बालीलाई आक्रमण गर्ने जरा कुहिने रोगको बारेमा पनि केही बताई दिनु हुन्छ कि ?
यस रोगको ढुसीले बालीको जरामा आक्रमण गर्दछ र जराहरु कुहिन्छन् फलस्वरुप जराले खाद्यतत्व सोसेर पठाउन सक्तैन र बिरुवा मर्दछ। यसको रोकथाम गर्नेसबैभन्दा राम्रो उपाय बाली-चक्र अपनाउने र बगैंचामा पानी जम्न नदिने नै हो तर रोगको आक्रमण बढी भएमा वेभिष्टिन २ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा मिसाई माटो उपचार गर्न सकिन्छ।
Q 25. के भूईंकाफलको फल लामो समयसम्म घामको सम्पर्कमा आउँदा नोक्सानी हुन्छ ?
Q 26. एक्कासी फलको मुख फुट्ने र फल खोक्रो हुने समस्या पनि यदाकदा सुनिन्छ नि?
Q 27. कुनै कुनै अवस्थामा फलहरु बेआकारका हुने, एकनासको रङ्ग विकास नहुने जस्ता समस्या पनि सुनिन्छ नि के कारणले होला ?
Q28. बजारमा मुल्य र माग कतिको छ ?